Ora 2 isan'andro ny Jiro aty Fianarantsoa
Donnez l'alerte concernant les coupures ou incidents sur les réseaux électriques ou l'alimentation en eau
Publiée par hasina — Le 14 décembre 2016
Fijaliana tanteraka ny afitsoky ny Jirama aty Fianarantsoa, zara raha hisy adiny 2 isan'andro ny Jiro no mandeha. Ny rano kosa dia mandeha manomboka @ny 22h30 alina ka hatramin'ny 4h30 maraina, eo dia tapaka indray. Alina foana ny fakana rano aty, koa manaitra ny tompon'andraikitra momba izany. Ny fety ity hoavy, ny Jiro tsy misy, ny rano koa tsy misy
Ahoana ny tena marina ao ambadik'ity delestage lavareny ity?! M...
Leo be zany zay amin'ny ilay Délestage
Mirehitra ny jirama ambohimanambola
Nanomboka tamin'ny folo ora maraina teo no nilelalela ny afo teto...
Tranon'ny Mpianatra may kilan'ny afo - Antsiranana
Mampalahelo indray ny vaovao azo androany fa vao vita fety dia ni...
May ny foibe Jirama Ambohimanambola
Tapaka nandritra ny ora iray teo ny jiro tamin'ny maraina.Nisy co...